ProtonMail Inopa IP yeMumiriri kuti Ibatsire Kusungwa Kwake | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi zvidimbu zviviri zvemashoko zvakaburitswa kuti tichaenda muchidimbu mune chimwe kuti tibudise chinhu chimwe: hapana chinhu chiri 100% zvakavanzika pa internet. Imwe yenhau inotaura nezveWhatsApp, uye pachayo haina kundishamisa zvachose, asi imwe inotaura nezvayo ProtonMail, sevhisi inonyora maemail kusvika padanho rekuti mu Russia yakavharwa. Zvino, nhau idzi dzakasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe nemumwe, uye zvinonyanya kunetsa mushumo wepaFacebook-muridzi wemeseji app.
Saka uye maverengero atinoita pa9to5Mac, chirevo kubva kunovimbika sosi chinovimbisa izvozvo mameseji haagone kunyorwa-kumagumo-kumagumo (end-to-end), nekuti Facebook neimwe nzira inokwanisa kuona zvirimo. Chirevo chacho chinotaura nezve metadata ongororo, nzira inozivikanwa nekambani yemagariro ekudyidzana kuti ione mameseji ane matambudziko pasina kuziva zvirimo, asi zvinorevawo kuti mamoderator neinjiniya vanogona "kuongorora mameseji evashandisi, mifananidzo nemavhidhiyo».
ProtonMail inoshanda, asi mukati memutemo
Chirevo pamusoro WhatsApp uye ayo ekupedzisira-kumagumo asiri-ekunyora anoti mamoderita anoshanda pasi pemamiriro ekuvanzika zvakanyanya, asi, sekutaura kwangu, kana munhu achizviona, Facebook AI inogona kuongorora zvakawanda, saka inogona kuita izvo Zvakanakisisa kuziva : dzidza izvo zvinotifadza kutiratidzira kushambadzira kwemunhu.
Dzimwe nhau dzinotonyanya kushamisa, asi zvishoma chete kana isu tichifunga nezvekuti zviitiko zvakaitika sei. Saka uye unounganidza sei Tech Crunch, mumiriri weFrance aishandisa ProtonMail kutaura nevamwe vanhu. Mapurisa eFrance hapana zvaaigona kuita kuwana chero ruzivo nezve aya mameseji, asi Europol yakaita vakuru veSwitzerland, kunoitirwa sevhisi uye nemitemo inofanirwa kutevedzera, kuvabvunza iwo ruzivo rwese rwavanogona kupa. Chinhu chega chavakaita pasi pemutemo wedare kupa mapurisa eFrance IP yemumiriri; iyo zvemukati zveemail zvinoramba zvisingazivikanwe.
Asi iyo IP yakavhura nzira nyowani yekuferefeta kwavari uye pakupedzisira vakamuwana. Pane musiyano mukuru pakati penzira mbiri dzekuita: neWhatsApp isu tatoziva kuti isu tine zero zvakavanzika; NeProtonMail, zvirinani izvo zvatinotumira zvichaonekwa chete nesu uye nemupi, asi hapana basa rinoregererwa kutevedzera mitemo yenyika yainoshanda, uye isu tinofanirwa kuziva izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Taizvitarisira kubva kuWhatsApp, asi kwete kuti ProtonMail yakapa IP yemumiriri weFrance kuti abatsire kusungwa kwake
Zvakanaka zvinhu hazvina kunyatsoita seakaundi. Mune zvakaitika sei kana. Ngatione, kuti munhu wese azvizive izvozvi, ese eInternet masevhisi, angave tsamba, vpn, nezvimwe, zvisinei kuti vataura zvakadii nezve zvakavanzika, kana dare redzimhosva rikauya, vanofanirwa kubatana, izvi ndezve munhu wese wese weInternet services. wepasi rose, izvo zvenyika hazvina basa. Iko kiyi ndeimwe chete, kana nyika iriko iko sevhisi iripo inokumanikidza kana kuti isachengeta marekodhi, kana ikasakusungira iwe nezvose uye nekudaro ichivachengeta, ipapo iwe uri kutyora maitiro avo epachivande avanoshambadza zvakanyanya. Semuenzaniso: vpns iri mumuromo memhumhi weUS, kuUS, havamanikidzwe kuchengeta zvinyorwa uye nekudaro kwave nezviitiko zvematare edzimhosva kuti vpns vashande pamwe neruramisiro uye vakabatana pasina dambudziko, asi sezvo vasina kuchengeta zvinyorwa nekuti mutemo hauvasungirire, nekuti zvinoitika kuti nedare redare nezvose, havana kukwanisa kuwana IP inosuruvarisa, ini handina kuzvigadzira pachangu, pakave nenyaya dzinoverengeka, saka chinhu chakakosha ndechekuti mutemo wenyika iyoyo unoraira uye nebasa rakanaka rebasa. Ini ndinopokana zvakanyanya kuti muSwitzerland vane chisungo chekuchengeta marekodhi, saka ProtonMail anoita zvakaipa uye anonyepa, nekuti kana vasingazochengete zvinyorwa, zvakafanana hazvina basa nemutemo wedare unouya kwavari, nekuti hongu, vangadai akashanda pamwe neruramisiro, asi kusava nezvinyorwa kwaigona kunge kusingawani chinhu zvachose. Ndo maitirwo ezvinhu, saka kana iri yekuhaya, semuenzaniso, yakanaka VPN, unofanirwa kuona kuti havachengete marekodhi uye kuti mutemo wenyika kwairi haivamanikidze kuchengeta zvinyorwa.
Anodiwa emilio akadaro
Yese sevhisi inoenderana nemitemo yenyika kwayiri. Vakuru vekutonga veSwitzerland vangangoda data rakadai kana chiitiko ichi chikaonekwa semhosva muSwitzerland. Iri kero yeIP yainzi yaishandiswa kudaidza nekutungamira kusagadzikana kwevanhu uye kuronga kutora kwezvivakwa zveruzhinji muFrance panguva ye "yellow vest" kuratidzira. Kutorwa kwezvivakwa zveruzhinji kunoonekwa kunge imhosva muFrance uye kune dzimwe nyika, kunyangwe Donald Trump achizviita. Kune rimwe divi, chero munhu anotenda kuti havazivikanwe zvachose kana achishandisa internet basa anoda kutariswa nachiremba. Kana usiri kuongororwa nemuridzi webasa, unotariswa neIPP, inogadzira software kana inogadzira chishandiso chawakashandisa. Kunyangwe kana vakakuudza kuti hava ... asi hei, kuchine vanhu vanotenda kuna Santa Claus.
Pindura Anodiwa Emilio
Sekukuudza kwandakakuita, zvinoitika kuti hakuna kungovepo nenyaya iyi muhupenyu, pakave nezvimwe zvakawanda, izvo zvausina kuziva hazvireve kuti izvo hazvina kuitika uye kwave kuine akawanda vpns, nekuti kunyangwe zvimwe zvinhu zvakakomba zvakakumbirwa kuti vashande pamwe neruramisiro uye vakazviita pasina mubvunzo, asi sezvo mutemo waisasungidzira kuti vachengete zvinyorwa, havana kuzvichengeta uye nekudaro zvese zvavakaisa mukutonga kwakazviita kwete kujekesa chero chinhu, nekuti pakanga pasina chinhu. Kunyangwe mazhinji vpn maseva nhasi anoenda kugondohwe, iyo inodambura sevha uye zvese zvinonyangarika.
Hakusi kutenda muzvishamiso, ichokwadi chehupenyu uye kuziviswa, seni, kuti hautende, ndiro dambudziko rako.
Dai protonmail yanga isina kuchengeta marekodhi, hapana chingadai chakaitika, nongedzera bhora, dambudziko harisi iro redare redzimhosva, dambudziko nderekuti protonmail yakatyora mamiriro ayo epachivande ekuchengeta marekodhi payakazvirumbidza pamusoro pekutaura neimwe nzira, nongedza bhora zvakare.
Handina zita akadaro
Asi akabatwa chaizvo nekushandisa e-mail, kwete ye vpn. Uye izvo zvakanyorwa chero kambani. Ivo vese vanoziva ndiani ari kubatanidza kumasevhisi avo. Izvo zvakanyatso taurwa kuti dai akashandisa vpn kana kupinda kubva kuTor, vangadai vasina kumubata. Iye mukomana akapinda tsamba sezvazviri, aine yake IP imba, isina vpn, isina isingazivikanwe browser mune Tor chirongwa, kana chero chinhu. Protonmail iri sei kusaziva kuti ndiani anobatanidza seizvi? Uye haigone kushanda pamwe neruramisiro? Ivo vanojekesa chaizvo paunenge uchigadzira account yako, kuvanzika hakureve kutapukira. Kana ivo vakabvunzwa chimwe chinhu chemhosva inopara mhosva muSwitzerland, vanoshanda pamwe nehurongwa hwekutonga. Vanoyambira. Ivo vari pachena mune iyoyo pfungwa.
Chero ani anoshandisa Protonmail masevhisi anozviita kuitira kuti chero Google iri pabasa kana Facebook pabasa iri kutarisa maemail avo. Uye mune iyo Protonmail inoenderana. Kunyangwe mune yazvino nyaya ivo havana kukwanisa kuona maemail. Izvo zvese zvakanyorwa uye zvinogona kungoonekwa nemuridzi weakaunzi. Protonmail haina kuzvibata nenzira ipi neipi, haina kunyepa, kana kuita chero chakaipa, ndoda kuputsa zvakavanzika kana zvakavanzika zvemumwe munhu.
Pano zviri nyore vamwe vanhu vakaona kuti vanogona kuyedza kukanganisa chimiro chekambani uye ivo vakauraiwa.
Pindura kune ini handina zita
WhatsApp haina kuzivikanwa uye haina kuchengetedzeka. Nderupi rudzi rwevoga rwatiri kutaura nezvaro? Dai chinyorwa ichi chaive pamusoro peiyo utopia ecosystem, zvingave zvakanaka
Pindura kuna Valentine
Microsoft yakabatana neOpen Infrastructure Foundation